Cabdi Weli Gaas oo ballan qaad u sameeyay ra'iisul wasaare Saacid. - Caasimada Online
Home Warar Cabdi Weli Gaas oo ballan qaad u sameeyay ra’iisul wasaare Saacid.
Cabdi Weli Gaas oo ballan qaad u sameeyay ra’iisul wasaare Saacid.
Ra’iisul Wasaarahii hore ee dalka Soomaaliya Cabdi Wali Maxamad Cali Gaas ayaa u ballan qaaday inuu la shaqeyn doono Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cabdi Faarax Garaad Shirdoon Saacid.
C/wali Maxamed Cali Gaas Ra’iisul Wasaarahii hore ee dalka Soomaaliya ayaa mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya waxaa sidoo kale uu ka codsaday inay la shaqeeyaan Ra’iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya si uu uguto waajibaadka shaqo ee horyaala.
Gaas ayaa sidoo kale wuxuu sheegay 06-Septempar sanad kahor ay aheyd maalin taariiqi ah oo dalka Soomaaliya lagu saxiixay Road-mapka shalay oo maalintaasi oo kale ku beegan dalka waxaa loo magacaabay Ra’iisul Wasaare cusub.
Waxuu sheegay Ra’iisul Wasaarihii hore inay hortaalo Shaqo adag oo loo baahanyahay inuu ka gudbo.
Cabdi Faarax Garaad Shirdoon Saacid ayaa balan qaaday dhankiisa inuu dhamaystiri doono dowladiisa uuna wadada u xaarayoMusuqmaasuqa.